🥇 ▷ Waqtiga xiga ee 'OPPO ECG watch smart' wuxuu soo bixi karaa dhamaadka Febraayo 2020 ✅
Waqtiga xiga ee ‘OPPO ECG watch smart’ wuxuu soo bixi karaa dhamaadka Febraayo 2020
OPPO dib ugama dhaceyso, in kasta oo ay soo daahay, tartankii loogu jiray in la dhiso shirkad tikniyoolajiyadeed oo buuxisa baahiyaha dhamaan qalabka xiiseeya. Haatan, ku dhawaad ​​dhammaan shirkadaha bilaabay sidii taleefano-gacmeedyada casriga ahi waxay iska diiwaan geliyeen inay yihiin waardiyeyaal smart, oo ka mid ah alaabada kale ee caqliga badan.
Twitterka sharciga ah Koontada ayaa daabacday sawir ama wakiil rasmi ah oo ah saacaddii ugu horreeyay ee caqli-gal ah shirkadda Shiinaha ee OPPO.
Marka laga eego aragtida shaashadda, smartwatch-ka wali wuxuu ilaaliyaa naqshadda caadiga ah ee smartwatch-ka maanta, oo leh garaac madow oo afar gees leh. Si kastaba ha noqotee, si ka duwan saacadaha kale ee caqliga leh ee laga heli karo suuqa, OPPO saacadaha smart waxay ku jiraan saacado gaduudan oo casaan ah.
Horey, wararka ku saabsan shaqeynta saacaddu way liqday, iyo sawir cusub oo la sii daayay ayaa xaqiijinaya tan. Qalabka smart ayaa leh lahayn giraangiraha, maadaama ay jiraan cayaaraha Apple Watch sida taaj dijital ah. Dhinaca midig ee sanduuqa, waxaa ku yaal laba badhammo oo halkaas la dhigo. Badhannada ayaa badiyaa xakameeya saacadda. Sidoo kale, suurtagal ahaan, mid ka mid ah batoonnada dhinacaas waa in lagu qalabeeyaa tilmaame dhacdada LED-ka.
#OPPO # smart watch wakiil wakiilo rasmi ah pic.twitter.com/znaH0f2Kvs
– Abdul Q. (@AndroidSaint) Febraayo 17, 2020
Saacadda xigta ee smart ee soo saaraha taleefannada casriga ah ee Shiinuhu wuxuu u baahan yahay in lagu qalabeeyo faahfaahinta u dhexeysa shaqada saacadda ee smart smart illaa laga helo dhammaan astaamaha qalabka raadraaca casriga ah. Xaqiiqdi, sida laga soo xigtay ilaha qaarkood, OPPO smart watch waxay awood u yeelan doontaa inay duubto garaaca wadnaha, cadaadiska dhiigga, iyo qaadato ECG. Faahfaahinta halkan kuma dhamaanayso. Intaa waxaa sii dheer, saacadda smart waxay sidoo kale awood u yeelan doontaa inay la socoto tayada hurdada, soo bandhigto warbixinnada ku saabsan kalooriyeyaasha gubtay, iyo inbadan.
Marka la sii daayo taariikhda, guud ahaan waxaa la rumeysan yahay inaan ka filan karno maqaalka dhammaadka Febraayo. Qiimaynta saacadahaas caqliga leh waa in ay ugu fiicnaataa $ 300.
OPPO F9 Plus madow, Smartwatch lacag ah Rs. 649 Rs. Waxaa lagu heli karaa kaydka 1500 hadda
Fitbit 3 Xamuul (Xarig Madoow, Cabbir: Joogto ah) Rs. Rs 9,999. 13,999 saamiyada Iibsada Hadda
Kooxdayda 2 (Xadhig madoow, cabir: joogto ah) Rs. 1,899 rupees. 2, 499 oo ka mid ah saamiyada Iibsiga Hadda